မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရမယ့်အစား ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တွေ‌ကြောင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဆုံးရှုံးနေပြီဖြစ်လို့ တရားမျှတမှုရစေချင်ပါတယ်လို့ ဗစ်တိုးရီးယားအမှု တရားမျှတရေး လူထုက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့လည် မြို့တော်ခမ်းမရှေ့မှာ လူထု ရာနဲ့ချီ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်စုဝေးခဲ့ကြပြီး နေပြည်တော်က Wisdom Hill ကျောင်းမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ အသက်သုံးနှစ်အရွယ် မူကြိုကျောင်းသူလေး ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပေးရေး တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ မဆုမွန်က တင်ပြပေးမှာပါ။
“ကျင့်ဝတ်ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ရဲအရာရှိများ အရေးယူပေး… အရေးယူပေး
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေး တို့အရေး…. တို့အရေး
ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်များ ……………… ဆန့်ကျင်ကြ…… ဆန့်ကျင်ကြ
မတရားအမိန့်အာဏာမှန်သမျှ………………. ဖီဆန်ကြ…. ဖီဆန်ကြ
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေး တို့အရေး…. တို့အရေး”
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခံထားရတဲ့ ဒီကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့အမည်အရင်းနဲ့ အမှုမှာပါဝင်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပျက်ပြားသွားတဲ့ပြရုပ် ဖြစ်ကြောင်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဥပဒေပညာရှင်တွေပါ ဝန်းရံတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ ရှေ့နေကြီး ဦးကြီးမြင့်က ပြောပါတယ်။
“အခုကိစ္စကတော့ အတော့ကို တရားလွန်တယ်ပေါ့နော်။ သိပ်ကိုတရားလွန်တယ်။ အမှု စပြီးတည်ဆောက်စဉ်က အမှုက Vitoria ထွက်တဲ့အတိုင်း ကိုကို၊ ညီညီနဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ သံသယရှိတဲ့ လူကို တန်းစီပြီးတော့ ထွက်ပြခိုင်းလိုက်ရင် ဒါက နှစ်ပတ်နဲ့ ပေါ်ရမယ့်အမှု၊ တရားခံဆိုတာ ဘယ်သူဆိုတာ ပေါ်ရမယ့်အမှုကို တမင်လမ်းကြောင်းလွှဲပြီးတော့ တည်ဆောက်တာ။ ပြည်သူတွေကတော့ ၀န်းရံတယ် သို့သော်လည်း ကာယကံရှင်မိသားစုကတော့ အလွန်ပင်ပန်းစိတ်ဆင်းရဲတယ် ဒီအတွက် ကျနော်တို့ ၀န်းရံတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုလာရောက်ဝန်းရံတာက အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ကလေးသူငယ်၊ မုဒိမ်းမှုတွေ လွယ်လွယ်ကူကူမဖြစ်အောင်၊ ပပြောက်သွားအောင် ၊ တရားဥပဒေ အမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင် ၀ိုင်းရံတာဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ဒီလိုယူဆပါကြောင်း နိဂုန်းချုပ်တင်ပြပါတယ်။”
ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် တရားမျှတမှု ရစေချင်ပါတယ်လို့လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးထွန်းကြည် ကလည်းပြောပါတယ်။
“အလွန်တရာမှ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဥပဒေ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှု မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဥပဒေဘက်သော်သားတွေကိုယ်တိုင်က ဥပဒေကို ချိုးဖောက်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဘယ်လိုလုပ်သွားတည်ဆောက်မလဲ ။ နောက်တခုက တည်ဆဲအစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ကင်းလွတ်နေတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေပါ။ ပူးပေါင်းလိုတဲ့စိတ်၊ သင့်မြတ်လိုတဲ့စိတ် မရှိဘူးဆိုတာကလည်း ၁၉ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေ သက်သေခံနေတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ အလွန်တရာမှ စိုးရိမ်ရေအမှတ်ကို ရောက်နေတယ်လို့ ဒီနေရာကနေပြီးတော့ သတင်းစကားပါးချင်ပါတယ်။”
ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခမ်းမရှေ့က Justice for Victoria ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် တရားမျှတမှု လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာတော့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေ အများပြည်သူတွေ အပါအဝင် စိတ်ဝင်စားသူရာနဲ့ချီ ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့မှာ အမှုရဲ့ သံသယတရားခံ အောင်ကြီးကို တရားရုံးက တရားရှင်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့နောက်တစ်ရက် ဒီဇင်ဘာလ(၁၉)ရက် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း အောင်ကြီးကိုလွှတ်ပေးတာ စောသေး‌ကြောင်းအပြင် ကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ အမည်အရင်းနဲ့ မိသားစုအချက်အလက် နေရပ်လိပ်စာတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက ရဲဇာနည်ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပါ။
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကို ဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ ကာယကံရှင် ဗစ်တိုးရီးယားမိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ရင်ဆိုင်နေချိန်မှာပဲ အမှုလိုက်ရှေ့နေတွေကိုပါ အပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြည်သူအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဒီအမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာအရေးယူပေးဖို့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ အများပြည်သူက တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကငျြ့ဝတျဥပဒခြေိုးဖောကျတဲ့ရဲအရာရှိမြား အရေးယူဖို့ ဆန်ဒပွတောငျးဆို
မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့အနနေဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့အခှငျ့အရေးကိုကာကှယျရမယျ့အစား ကငျြ့ဝတျခြိုးဖောကျခဲ့တဲ့ ဥပဒမေဲ့လုပျရပျတှေ‌ကွောငျ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှုဟာ စိုးရိမျစရာဖွဈလာပွီး လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှအေပျေါမှာ ပွညျသူလူထုရဲ့ ယုံကွညျမှုကို ဆုံးရှုံးနပွေီဖွဈလို့ တရားမြှတမှုရစခေငျြပါတယျလို့ ဗဈတိုးရီးယားအမှု တရားမြှတရေး လူထုက တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ ဒီကနေ့ ရနျကုနျမွို့လညျ မွို့တျောခမျးမရှမှေ့ာ လူထု ရာနဲ့ခြီ ငွိမျးခမျြးစှာ ခြီတကျစုဝေးခဲ့ကွပွီး နပွေညျတျောက Wisdom Hill ကြောငျးမှာ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အနိုငျကငျြ့ခံခဲ့ရတဲ့ အသကျသုံးနှဈအရှယျ မူကွိုကြောငျးသူလေး ဗဈတိုးရီးယားအတှကျ တရားမြှတမှုဖျောဆောငျပေးရေး တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ မဆုမှနျက တငျပွပေးမှာပါ။
“ကငျြ့ဝတျဥပဒခြေိုးဖောကျတဲ့ရဲအရာရှိမြား အရေးယူပေး… အရေးယူပေး
ဗဈတိုးရီးယားအမှု တရားမြှတမှုဖျောဆောငျရေး တို့အရေး…. တို့အရေး
ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့ ဥပဒမေဲ့ လုပျရပျမြား ……………… ဆနျ့ကငျြကွ…… ဆနျ့ကငျြကွ
မတရားအမိနျ့အာဏာမှနျသမြှ………………. ဖီဆနျကွ…. ဖီဆနျကွ
ဗဈတိုးရီးယားအမှု တရားမြှတမှုဖျောဆောငျရေး တို့အရေး…. တို့အရေး”
လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ကြူးလှနျခံထားရတဲ့ ဒီကလေးငယျ ဗဈတိုးရီးယားရဲ့အမညျအရငျးနဲ့ အမှုမှာပါဝငျသူတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှကေို ထုတျဖျောခဲ့တဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့လုပျရပျဟာ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး ပကျြပွားသှားတဲ့ပွရုပျ ဖွဈကွောငျး တကျကွှလှုပျရှားသူတခြို့ က ပွောဆို လိုကျပါတယျ။ ဗဈတိုးရီးယားအမှုမှာ ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့လုပျရပျဟာ ဥပဒမေဲ့ လုပျရပျဖွဈလာတဲ့အတှကျ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ဥပဒပေညာရှငျတှပေါ ဝနျးရံတောငျးဆိုခဲ့ကွတာဖွဈတယျလို့ ရှနေ့ကွေီး ဦးကွီးမွငျ့က ပွောပါတယျ။
“အခုကိစ်စကတော့ အတော့ကို တရားလှနျတယျပေါ့နျော။ သိပျကိုတရားလှနျတယျ။ အမှု စပွီးတညျဆောကျစဉျက အမှုက Vitoria ထှကျတဲ့အတိုငျး ကိုကို၊ ညီညီနဲ့ တာဝနျရှိတဲ့ သံသယရှိတဲ့ လူကို တနျးစီပွီးတော့ ထှကျပွခိုငျးလိုကျရငျ ဒါက နှဈပတျနဲ့ ပျေါရမယျ့အမှု၊ တရားခံဆိုတာ ဘယျသူဆိုတာ ပျေါရမယျ့အမှုကို တမငျလမျးကွောငျးလှဲပွီးတော့ တညျဆောကျတာ။ ပွညျသူတှကေတော့ ဝနျးရံတယျ သို့သျောလညျး ကာယကံရှငျမိသားစုကတော့ အလှနျပငျပနျးစိတျဆငျးရဲတယျ ဒီအတှကျ ကနြျောတို့ ဝနျးရံတာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီလိုလာရောကျဝနျးရံတာက အကွောငျးမဲ့မဟုတျဘူး၊ ကနြျောတို့နိုငျငံရဲ့ ကလေးသူငယျ၊ မုဒိမျးမှုတှေ လှယျလှယျကူကူမဖွဈအောငျ၊ ပပွောကျသှားအောငျ ၊ တရားဥပဒေ အမှနျအတိုငျးဖွဈအောငျ ဝိုငျးရံတာဖွဈတယျလို့ ကနြျောတို့ ဒီလိုယူဆပါကွောငျး နိဂုနျးခြုပျတငျပွပါတယျ။”
ဗဈတိုးရီးယားအတှကျ တရားမြှတမှု ရစခေငျြပါတယျလို့လညျး နိုငျငံရေးအကဉျြးသားဟောငျးမြားအဖှဲ့ ဦးဆောငျကျောမတီဝငျ ဦးထှနျးကွညျ ကလညျးပွောပါတယျ။
“အလှနျတရာမှ စိုးရိမျဖှယျရာပါ။တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးဟာ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဥပဒေ သကျဝငျလှုပျရှားမှု မရှိတဲ့ တိုငျးပွညျမှာ ဥပဒဘေကျသျောသားတှကေိုယျတိုငျက ဥပဒကေို ခြိုးဖောကျနတေဲ့ အခွအေနနေဲ့ အခြိနျအခါမြိုးမှာ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးကို ဘယျလိုလုပျသှားတညျဆောကျမလဲ ။ နောကျတခုက တညျဆဲအစိုးရရဲ့ အုပျခြုပျမှုအောကျမှာ ကငျးလှတျနတေဲ့ ဌာနဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးတှပေါ။ ပူးပေါငျးလိုတဲ့စိတျ၊ သငျ့မွတျလိုတဲ့စိတျ မရှိဘူးဆိုတာကလညျး ၁၉ ရကျနေ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲကနေ သကျသခေံနတေယျ။ အဲဒီအတှကျကွောငျ့မို့လို့ ကနြျောတို့ တိုငျးပွညျတရားဥပဒစေိုးမိုးရေးဟာ အလှနျတရာမှ စိုးရိမျရအေမှတျကို ရောကျနတေယျလို့ ဒီနရောကနပွေီးတော့ သတငျးစကားပါးခငျြပါတယျ။”
ဒီကနေ့ ရနျကုနျမွို့ မွို့တျောခမျးမရှကေ့ Justice for Victoria ဗဈတိုးရီးယားအတှကျ တရားမြှတမှု လူထုလှုပျရှားမှုမှာတော့ နိုငျငံရေးလှုပျရှားသူတှေ၊ ဥပဒပေညာရှငျတှေ၊ တကျကွှလှုပျရှားသူတှနေဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးလှုပျရှားသူတှေ အမြားပွညျသူတှေ အပါအဝငျ စိတျဝငျစားသူရာနဲ့ခြီ ပါဝငျခဲ့ကွတာပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာလ (၁၈)ရကျနမှေ့ာ အမှုရဲ့ သံသယတရားခံ အောငျကွီးကို တရားရုံးက တရားရှငျလှတျပေးခဲ့တဲ့နောကျတဈရကျ ဒီဇငျဘာလ(၁၉)ရကျ ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲအတှငျး အောငျကွီးကိုလှတျပေးတာ စောသေး‌ကွောငျးအပွငျ ကလေးငယျ ဗဈတိုးရီးယားရဲ့ အမညျအရငျးနဲ့ မိသားစုအခကျြအလကျ နရေပျလိပျစာတှကေို ရဲတပျဖှဲ့တာဝနျရှိသူတှကေ ရဲဇာနညျဆိုတဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ ထုတျဖျောပွသခဲ့တာပါ။
ဗဈတိုးရီးယားအမှု အမှုမှနျပျေါပေါကျရေးနဲ့ ကငျြ့ဝတျဖောကျဖကျြခဲ့တဲ့ ရဲတပျဖှဲ့တာဝနျရှိသူတှကေို ဥပဒအေရ တရားစှဲဆိုသှားမယျလို့ ကာယကံရှငျ ဗဈတိုးရီးယားမိသားစုနဲ့ နီးစပျသူတှကေ ပွောဆိုထားပါတယျ။ ဗဈတိုးရီးယားအမှု ရငျဆိုငျနခြေိနျမှာပဲ အမှုလိုကျရှနေ့တှေကေိုပါ အပွနျအလှနျတရားစှဲဆိုမှုတှေ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ပွညျသူအမြားစိတျဝငျစားနတေဲ့ ဒီအမှုမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့တပျဖှဲ့ရဲ့ တုံ့ပွနျဆောငျရှကျခကျြတှဟော ကငျြ့ဝတျဖောကျဖကျြခဲ့တာကွောငျ့ လကျရှိအစိုးရအနနေဲ့ တဈစုံတဈရာအရေးယူပေးဖို့ တကျကွှလှုပျရှားသူတှနေဲ့ အမြားပွညျသူက တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ